किन समर्थन फिर्ता लिन ड,राउदै छ माओवादी ?:: Mero Desh
किन समर्थन फिर्ता लिन ड,राउदै छ माओवादी ?
Published on: ७ बैशाख २०७८, मंगलवार १३:५४
‘काठमाडौं । पार्टी कार्यालय कोटेश्वर पोरिसडाँडामा आयो जित नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सकि एको छ । मंगलबार बसेको स्थायी समिति बैठकले ओली सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ कि यथावतै रा -ख्छ भन्नेमा आज पनि
‘सरकारलाई दिँदै आएको फिर्ता लिनेबारे कुनै निर्णय भएको छैन । यसअघि यस विषयमा पटक पटक ,बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थनबारे छलफल गरे पनि कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।
‘यसरी नयाँ सत्ता समीकरणको टुंगो अन्तिम अवस्थामा नपुगेसँगै ओली सरकारलाई दिँदै आएको समर्थन यथावतै रहेको छ । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको ,कुराकानीमा नेता
‘देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता बारे छलफल गरिए पनि कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनका अुनसार यस विषयमा भोलि पनि बैठक बस्दैछ” बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको
‘कुराकानीमा नेता देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता बारे छलफल गरिए पनि कुनै निर्णय नभएको बताएका छन् । उनका अुनसार यस विषयमा भोलि पनि…
थप समाचार,,एमसीसी” अरु देशको नक्कल नेपाल मा चल्न दिन्न,जस्तोसुकै प्रस्थित को सामना, गर्न तयार छु”:-सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा।
‘काठमाडौँ – सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संघीय संसदलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारिएको आरोप लगाएका छन्। संसद राष्ट्रहितको पक्षमा उभिदा घेराबन्दी र दबाब मा पार्ने काम हुँदै आएको बताएका हुन्।आइतबार नेपाल पत्रकार महासंघको नवनिर्वाचित केन्द्रीय
‘कार्यसमितिको पद हस्तान्तरण कार्यक्रममा सापकोटाले संसदलाई जिवन्त, जनमुखी बनाउन खोज्दा र संविधानको पक्षमा उभिदा घेरबन्दी भोग्नु परेको दाबी गरेका हुन उनले भने, ‘जब संसदलाई जिवन्त र जनमुखी बनाउँदै संविधान को रक्षाका लागि दृढतापूर्वक अघि बढ्न सुरु गर्‍यो।
‘राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न अघि बढ्यो त्यहीबाट संघीय संसदमा माथि चौतर्फी घेराबन्दी भयो, भइरहेको छ।’ शनिबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वदलीय बैठ कमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पो रेसन (एमसीसी) सम्झौता संसदबाट पारित गराउनुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए।
‘प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति आपत्ति जनाउँदै सभामुख साप कोटाले पत्रकार महासंघको मञ्चमार्फत एमसीसी”प्रति आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग निरन्तर मतभेद खेप्दै आएका सापकोटाले यसलाई व्यक्ति गत टकरावका रुपमा लिन नहुने र सत्यको बाहिर आएर छाड्ने जिकिर गरे।
‘भयानाक भ्रमको अन्त्य हुन्छ। अहिले बहस भइरहेको,यो व्यक्ति व्यक्तिबीचको होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सँग सम्बन्धित छ, सभामुख सापकोटाले अगाडि भने, ‘मलाई यति धेरै दृढ विश्वास छ कि धेरै मान्छेलाई केही समय भ्रममा पार्न सकिन्छ, केही मान्छेलाई सधै भ्रममा पार्न सकिन्छ।
‘तर धेरै मान्छेलाई सधैँ भ्रममा पार्न सकिँदैन।उनले आफू ले जे गरेको छु ठीक गरेको र भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तरता दिने अडान व्यक्त गरे।‘भन्नेले भन्छन्, मलाई वास्ता छैन म अघि बढेर गरेको छु। मैंले जे गरेको छु देश र जनताको हितका लागि काम गरेको छु। कहीँले कहीँ नजानेर गल्ती भयो होला तर जानेर गरेको छैन।